Isayine esitebeleni sase-USA iJoyous
USUZOSABALALA ngisho naphesheya kwezilwandle umculo weJoyous Celebration njengoba isisayine ngaphansi kwesitebele iMotown Gospel, ezinze e-USA ezophinde ihambise umculo waleli qembu emazweni afana neCanada. Isithombe: Instagram
Nokubongwa Phenyane | March 24, 2021
ABASUNGULI beqembu lomculo wokholo iJoyous Celebration, sebeveze ukuthi banqume ukusayinisa leli qembu esitebeleni saphesheya kwezilwandle ngenhloso yokusabalalisa umculo walo.
Lokhu kulandela ukuthi kube nesivumelwano phakathi kwesitebele sakuleli i-Universal Music Africa neMotown Gospel, ezinze e-USA.
UDkt Lindelani Mkhize ongomunye wabasunguli baleli qembu, uveze ukuthi lesi isiqalo esisha kubona njengoba belungiselela ukukhipha i-albhamu yabo yesi-25.
“Kule minyaka engu-25 siyingxenye yaleli qembu, kuningi ebesikufunda ngakho ke ukushintsha kwezinto ezenzeka ngayo kulo mkhakha esikuwona sibone kungcono ukuthi sithathe lesi sinqumo. Umculo weJoyous usuzotholakala e-USA naseCanada okwamanje esithemba ukuthi lesi yisiqalo esisha. Sizizwa sivuselelekile, sinomdlandla omusha njengoba sishintsha izinto nje siya kwelinye izinga,” kuchaza uLindelani.
Uthe uhambo lwabo lube olungelula kuyona yonke le minyaka kodwa kuyabajabulisa ukuba la bekhona manje.
“Ukuhlanganisa iminyaka engu-25 akulula neze, ukuba nobudlelwano nalesi sitebele kuyasijabulisa njengoba kuzovula amanye amathuba emazweni aphesheya kwezilwandle njengoba sidinga ushintsho. Esifuna ukukusho, i-albhamu entsha isetshenzwe kakhulu futhi abantu abalindele okuhle nokumnandi kodwa kuyona maduzane, njengoba izophuma iPhasika lingakadluli,” kusho yena.
U-EJ Gaines ongomunye wabaqondisi besitebele iMotown Gospel, uveze ukuthi bakujabulele ukusebenzisana ne-Universal Music Africa, ebathulela iJoyous Celebration asebebonile ukuthi yiqembu elithandwayo emhlabeni wonke.
USipho Dlamini ophethe i-Universal Music Group kuleli, uveze ukuthi leli thuba kube elijabulisayo njengoba leli qembu liqhubeka likhula.
“Umculo wabo uzofinyelela nakwabanye abalandeli babo. Siyabemukela futhi siyathemba ukuthi sizosebenzisana kahle ukuze kuqhubeke nokuvuleka kwamanye amathuba. Sizosebenza nabo kukhona konke abakwenzayo okuthinta nokuqopha umculo wabo nokuhambisa iqembu lonke la liya khona. Lokhu kufezekise iphupho lethu leminyaka," kuchaza uSipho.
I-albhamu yeJoyous Celebration 25 ezophuma isihloko sayo sithi Still We Rise.
USUZOSABALALA ngisho naphesheya kwezilwandle umculo weJoyous Celebration njengoba isisayine ngaphansi kwesitebele iMotown Gospel, ezinze e-USA ezophinde ihambise umculo waleli qembu emazweni afana neCanada ISITHOMBE:SITHUNYELWE